China kwizinga eliphezulu wayesebenzisa non intonga waphosa intsimbi Qhotsa pan inyama yenyama inyama ukwenziwa kunye mveliso | ISANXIA
I-enamel ekumgangatho ophezulu engaxutywanga yintsimbi yokuqhotsa ipani yesitovu
Ingcaciso:60260 * 38mm
umbala:Luhlaza, orenji, tyheli, bomvu, njl, imibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo
Vumela ukonwabela imifuno ye-barbecue esempilweni kunye ne-barbecue, inkukhu okanye intlanzi, kwaye uyonwabele incasa ye-barbecue yeklasikhi unyaka wonke.
Izinto zesinyithi zokuhambisa zinokuhambisa ngokufanelekileyo kunye nokugcina ubushushu, ukuze ipani ipheke ngokulinganayo. Esi sitya sinesiphatho esigqibeleleyo se-enamel, esinokwenza ukuba izithako zijike ngokulula embizeni, kungabi lula ukunamathela emazantsi embiza. Ukubonakala kokutya kucacile ngakumbi kwaye kuthambile, kwaye incasa inokufikelela ngokulula imeko efanelekileyo oyifunayo.
Yonke imbiza yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu. Yamkela ubuchwepheshe bokuphosa i-dis obuphambili. Iindlebe zembiza kunye nesiphatho sinxulunyaniswa nomzimba wembiza, oqinileyo nozinzileyo. I-glaze ye-enamel ebusweni bembiza ikhethwe ngononophelo kwi-glazel glaze edumileyo. Ayiphelelanga kwimibala emihle kwaye yenza imeko yokupheka ibe ntle njengeentsuku ezishushu, kodwa ikwanazo neetalente ezininzi, ezinje ngokukhusela imbiza ekurhwebeni, zenze ukuba izithako zilele kumphezulu womgubo ngokugudileyo kwaye kungabi lula ukunamathela embizeni. Uqweqwe lwawo olulungileyo, ungoyiki ubushushu obuphezulu, ngomlilo akufuneki ukuba ukhathazeke ngombala, uwe.
Umphezulu obunjiweyo wenziwe ngembiza, kwaye umphezulu womhlaba ophekiweyo usetyenziswa kwi-grill ephezulu yesitovu esidala, esinokuthintela ioyile egqithisileyo ekubeni ishiye ukutya. Ilungele kakhulu inyama yenkuku, inyama yehagu kunye nemifuno. Yongeza amanqaku emigca yokutya kwindawo yakho yokutya ukuze uyenze ibe ntle ngakumbi kwaye inomdla.
Iipropu zokuvuza zenzelwe ngokukodwa kumacala omabini embiza, ekulungele ukulahla ioyile kunye namafutha. Ukupheka ngeoyile encinci kwenza ukutya kube sempilweni ngakumbi.
Le tray yokubhaka engenantonga ilungele zonke iindlela zokufudumeza. Ilungele igesi, isipheki sokungenisa, iglasi yodongwe kunye nomphezulu wesitovu sombane. Ukungcola kuyamelana kwaye kulula ukucoceka. Yonwabela isitayile sokupheka kwebhasikithi kunye nosapho lonke.
Egqithileyo I-enamel efanelekileyo kunye neyolisayo idibanisa i-oven yaseDutch
Okulandelayo: Ubisi Embizeni Cast Iron wayesebenzisa Casserole Non-Stick ukuba Qhotsa Pan Baby Qhotsa Pan Baby ukugqibezela Ukutya Ubisi Hot Noodle Pot
ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, I-Iron Iron Skillet, i-Cast yentsimbi enqabileyo, Isinyithi se Iron Iron, xtreme Iron Skillet, uNamel Skillet,